Usekela-Mongameli ophikisayo uyeka ukuba yi-CEO yeRealme | Zonke iinkonzo ze-intanethi
U-Oppo VP urhoxile ukuba yi-CEO yeRealme
NjengakwiHloniphe kunye neHuawei, kunye neNubia kunye neZTE, U-Oppo ungenise iRealme, inkampani encedisayo yenkampani ngoku ene-CEO entsha. Lo nguSky Li, usekela-mongameli wangaphambili we-Oppo osandul 'ukurhoxa kweso sikhundla ukuze anike uqeqesho kwiRealme.
Ngelixa esi sigqibo sinokuba ngaphezulu kokutshintsha kweqela labasebenzi kunenye into, Inyaniso yokuba u-Oppo ufuna ukunika ukubalasela ngakumbi kwinkxaso-mali yakhe yeyona nto icace gca, kuba inenkululeko engakumbi yokusebenza kwimimandla eyahlukeneyo.
Le sub-brand yazalwa eIndiya ngoMeyi walo nyaka. Isizisele iRealme 1 njengemodeli yayo yokuqala, eyayithengiswa kuphela kwi-Intanethi.
Phakathi kwezicwangciso ze-Realme zexesha elifutshane neliphakathi, ngokwenqaku likaGartner, kunye nokwaziswa kwe-CEO entsha, yile ukwanda kwiAfrika, eMidwest, ezinye iimarike ezikhulayo eAsia, nakumbindi nasempuma Yurophu. Oku ngaphandle kokulibala i-India, eyona ntengiso iphambili apho iqale khona.
Ngakolunye uhlangothi, Inkampani ilindele ukuba izuze ukukhula nge-9% ekupheleni konyaka, ngokweengxelo ezinikwe kwinkomfa yeendaba apho kwenziwa esi saziso. Ngokusekwe koku, unokuba usungula isixhobo esineempawu ezibalaseleyo kunye neenkcazo zokuphinda ulandele indlela yakho entsha kunye nokufumana ingqalelo kuluntu oludlayo.
Ukuthetha ngakumbi ngeRealme, inkampani inombono ocacileyo: ukukhuphisana kwimakethi ekumgangatho ophakathi. Oku, ukukhulelwa e-India-indawo evelayo- kuluntu olungenazinto zoncedo, iceba ukuqhubeka nomgca ofanayo ophunyezwe ngeRealme 1, apho Injongo yayo ayizukuba yenye into ngaphandle kokubonisa ukuhambisa okuphakathi kwinqanaba ngexabiso eliphantsi kanye njengo-Oppo uhlala esenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Oppo VP urhoxile ukuba yi-CEO yeRealme